AirMule မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လူနာတင်ယာဉ်သမီးကညာကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို - သတင်း Rule
ဣသရေလအမျိုး၌၎င်း၏ပထမဆုံး untethered လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို ယူ. ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလူနာတင်ကားကရဟတ်ယာဉ်များမဟုတ်နိုင်နေရာများအတွက်လေယာဉ်ဆင်းသက်နိုင်စွမ်း, နှင့်လူနှစ်ဦး airlift နိုင်ပါလိမ့်မည်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “AirMule မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လူနာတင်ယာဉ်သမီးကညာကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 13 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 12.01 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
လူနှစ်ဦး airlift ဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်လူနာတင်ယာဉ်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့လေထုမှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီ.
အဆိုပါ AirMule, ချွတ် ယူ. ဒေါင်လိုက်ဆင်းသက်နိုင်သော, ထိုကဲ့သို့သောစစ်မြေပြင်ပေါ်အဖြစ် - တစ်ဦးရဟတ်ယာဉ်ဆင်းသက် unfeasible သည်အဘယ်မှာရှိအခွအေနအဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. အဆိုပါမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်, အစ္စရေးကုမ္ပဏီ Tactical စက်ရုပ်ဖွငျ့, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မကြာသေးခင်ကမွငျဖူးပေမယ့်မှတက် 450kg အထိသယ်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် 31 မိုင်.
အဆိုပါ Single-အင်ဂျင်, ပြည်တွင်းရေးရဟတ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် untethered လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်အစ္စရေးလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ထံမှရှင်းလင်းရေးရရှိမှုပြီးနောက်မေဂိဒ္ဒေါလေယာဉ်ကွင်းမှာကို set up ယာယီစမ်းသပ်စက်ရုံထဲကနေလေထုယူ.
အဆိုပါကုမ္ပဏီယခုနှစ်အတွင်း AirMule ရဲ့ကုန်တင်-တင်ဆောင်လာသောစွမ်းရည်သရုပ်ပြဖို့စီစဉ်ထား, ထက်ကျော်လွန်-line-of-မျက်မှောက်စမ်းသပ်ခြင်းလည်းစီစဉ်ထားအတူ.
မြောက်ပိုင်းဣသရေလအမျိုး၌မေဂိဒ္ဒေါလေယာဉ်ကွင်းမှာကို set up The Tactical စက်ရုပ် AirMule စမ်းသပ်ပျံသန်းစက်ရုံ. ဓါတ်ပုံ: Tactical စက်ရုပ်
စစ်မြေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးအကျစ်လစ်သိပ်သည်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်စနစ်တခုသိသာအကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, သောကွောငျ့၎င်း၏ပြည်တွင်းရေးရဟတ်စနစ်၏အဆောက်အဦးများနှင့်အခြားပိတ်ဆို့ခြင်းနီးစပ်နီးကပ်အတွက်ပျံသန်းဖို့စွမ်းရည်, ဒါကြောင့်အစဉ်အလာလေယာဉ်သူနာပြုကားများသည်ကျော်သိသိသာသာအစွန်းပေးသည်.
Tactical စက်ရုပ်လူ-ထမ်းမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါဘူး. တရုတ် Ehang 184 ခရီးသည်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ခဲ့သည် Las Vegas မှာ CES မှာချွတ်ပြသ ဇန်နဝါရီလအစမှာ, ထရန်အဘို့အအလေးချိန်ရှိ 100kg မှလူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကိုတက်တင်ဆောင်လာသောနိုင်စွမ်း 23 63mph မှတက်၏အမြန်နှုန်းမှာမိနစ်.
24820	1 အပိုဒ်, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ (စစ်ရေး), မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ (Non-စစ်ရေး), ဣသရလေ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိက, သတင်း, စက်ရုပ်, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ, ကမ္ဘာ့ဖလားသတင်း
← ငါ့စမတ်ဖုန်းသောက်သည် [VIDEO] ထက်လျော့နည်းအတွက်နယူးမူးယစ်ဆေးဝါးရယူထားသောစိတ်ကျရောဂါ 24 နာရီ ! [VIDEO] →